Fizahantany eto Madagasikara Tsy mahavelon-tena ireo valan-javaboary
Fiarovana ny tontolo iainana Tsy fandrarana fotsiny fa arahana vahaolana ara-toekarena
Vina napetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny ny hoe :
Sisintanin’i Madagasikara Mila ezaka ny fiarovana
Mbola marefo ny fiarovana ny sisintanin’i Madagasikara ary ilaina ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny amin’izany hoy ny firenena Japoney sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho amin’ny Fifindra-monina (OIM).
Tetikasa fanajariana ny eto an-drenivohitra 75 tapitrisa dolara no homen’ny Banky Iraisam-pirenena
Nampahafantarina tetsy amin’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany tetsy Anosy omaly ny mahakasika ilay tetikasa PRODUIR ( PROjet de Développement Urbain Integré et de Résilience)
Fampandrosoana ny sehatra tsy miankina Tokony himasoan’i Madagasikara
Mandalo eto Madagasikara nandritra izay herinandro izay ny filoha lefitry ny toekarena sy fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ny IFC (International Finance Corporation), Hans Peter Lankes.
Tambin-karaman’ny mpampianatra Nisy ny fanitsiana, hoy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena
Namoaka fanambarana fohy tetsy amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy ny
Tsy mahaleotena ara-bola mihitsy ireo valan-javaboary eto Madagasikara kanefa mila vola ny fiarovana sy ny fikojakojana azy ireo.
Vahaolana maharitra ny andraisana fotodrafitrasa
handraisam-bahiny raha ny tetikady sy drafi-politika vaovao napetraky ny Madagascar National Park (MNP) mba hampidiram-bola sy ho fiarovana ary ny hikojakojana ireo valan-javaboary misy. Entanina, araka izany, ny fampiasam-bola avy amin’ny tsy miankina
hananganana sy hiarovana ireo fotodrafitrasa handraisam-bahiny amin’izy ireny mba ho fidiram-bola. Tsiahivina fa ny taona 2017 no nahazo famatsiam-bola farany avy amin’ny Banky Afrikanina ho amin’ny Fampandrosoana (BAD) ny valan-javaboary teto Madagasikara ho fiarovana ny amin’ny fiovaovan’ny toetrandro. Ho
fanatanterahana io drafi-politika vaovao io dia efa nisy ny fanadihadiana manokana nataon’ny foibe iraisam-pirenena ho fiarovana ny natiora nanomboka ny volana mey lasa teo ka hifarana
ny taona 2020. Hisy, araka izany, ny fampahafantarana ny ampahan’ny fanadihadiana hatolotra ireo mpandraharaha amin’ny fizahantany ny 18 septambra ho avy izao, hatao eto Antananarivo ka valan-javaboary miisa 6 no voakasik’izany.